Amin'ny fahazazany dia zava-dehibe ny mihevitra manokana ny fampivoarana fahaizana matanjaka tsara, satria tsy manentana ny fampandrosoana ny kabary fotsiny izy io, fa koa manampy amin'ny fampandrosoana fifampiraharaham-pihavanana.
Mba hampivelarana fahaiza-manao matanjaka tsara, afaka mampiasa fitaovana maromaro isan-karazany ianao. Ny ankizy mahaliana indrindra dia hanandrana hamorona asa tanana avy amin'ny karazany hafa.
Ahoana ny fomba hanaovana lahatsoratra avy amin'ny serealy?
Azonao atao ny manolotra ilay ankizy hamorona asa tanana be dia be amin'ny fampiasana karazanà karatra. Mba hanaovana izany dia mila:
divay isan-karazany: pasta, buckwheat, millet, vary, lentils.
Raiso ny baoritra, boribory ary tapaho ny template vokatra - kapoaka, kitapo, milina fanoratana, biby iray. Amin'ny maha-môdely, dia misy zavatra azo atao.
Mendri-pantsika ny modely ateraky ny faritra.
Avy eo dia omentsika ilay zaza ary manolotra soso-kevitra amin'ny fametrahana ny sehatra misy ny môdely, mamorona sary manonta.
Afaka manala pasta lava ianao amin'ny rongony, loko avy amin'ny loko samihafa, maka lava lava ary mikararao ireo macaroons mba hahatonga ireo kavina miloko.
Alphabet avy amin'ny voankazo
Raha toa ka liana amin'ny taratasy ny ankizy dia afaka manomboka mahafantatra azy amin'ny alfabeta ianao. Ny zaza no tena mahay mamaritra ny abidia, raha toa ka volom-borona ny taratasy, dia azo henoina izy ireo, ary milalao azy ireo. Hatramin'ny mety hisian'ny fahatsapan-tarehy mailaka dia hampitombo ny dingana tsianjery izany.
Mba hamoronana alfabeta dia mila ireto manaraka ireto ianao:
grôtô (tahiry, tsaramaso, buckwheat, pitombe).
Manaova tahirin-tsarimihetsika ary apetaho eo aminy ny litera amin'ny alfabeta.
Esory ireo litera vokatra ireo.
Mampiasà mololo amin'ny taratasy.
Atsaharo ny kôbôta ary apetraho amin'ny taratasy tsirairay. Amin'izany fotoana izany, dia misy karazana hafa: azo atao ny manetona karazana serealy maromaro amin'ny taratasy iray na manao taratasy manasaraka tsirairay.
Ahoana ny fomba hanaovana ny lahatsoratra ho an'ny ankizy amin'ny semolina: kilasy maoderina?
Ny Semolina no mora ampiasaina amin'ny fanaovana asa tanana na dia ny ankizy madinika indrindra aza. Azo alaina amin'ny sira na kafe ihany koa izy io. Ny ankizy dia tena liana indrindra amin'ny fanaovana ezaka amin'ny fanaovana manga amin'ny alalan'ny rantsantanana iray.
Ho an'ny marika, mila manamboatra laka lehibe ianao ary mandatsaka manga ao anatiny. Ny haavon'ny loko dia tokony mihoatra ny 5 mm.
Ilaina ny mametraka ny valizy manerana ny vakim-paritra.
Avy eo ilay olon-dehibe dia maneho ny zazakely amin'ny fomba fanoratana rantsan-tanana amin'ny manga. Mandalo ny rantsan-tongony izy manoloana ny endrik'ilay manga ary manisy endrika isan-karazany: faribolana sy zorony, biby, fitaterana, sns.
Ho an'ny tombontsoa lehibe indrindra, ny tsy fahampiana dia mety ho miloko matevina (maitso, yônina na fingotra amin'ny pensilihazo miloko).
Noho izany, ny zaza dia tsy mitombo fotsiny ny fahatsapana manintona sy ny fahaizan'ny maotera, fa ny fisainana ara-boajanahary ihany koa. Ankoatra ny fanaovana manga, dia azo ampiasaina hanoratana bebe kokoa ny rakitra rehefa mamorona rojotra mampiasa karazany hafa.
Fananganana avy amin'ny plastikaine sy serealy ho an'ny ankizy
Ny famoronana asa tanana avy amin'ny fitaovana marobe dia mampianatra ny ankizy hampiarahana ny fomba isan-karazany. Azon'ilay ankizy atao ny manangana vazy plastinina ary mameno azy amin'ny croup. Mba hanaovana izany dia mila:
céréales (millet, vary na buckwheat).
Manamboatra vazy avy amin'ny plastinina misy isika, ka misy lavaka lehibe ao anaty croup ao anatiny.
Avy amin'ny sisa amin'ny "plastika" plastika no ataontsika - ireo no ho vodin'ny vazy.
Raiso ny voditongotra ary atsipazo ao anaty vazy.
Noho izany, afaka manamboatra vazy maromaro miaraka amin'ny karazana karazana marobe ianao ary ampiasaina amin'ny lalao tantara momba ny tantara miaraka amin'ilay zaza (ohatra, afaka manome sakafo ny biby kilalao).
Ny famoronana asa tanana avy amin'ny céréales amin'ny zaza dia asa tena mahafinaritra sy mahafa-po. Satria tsy vitan'ny hoe mampivelatra ny zaza izany, fa mifandray amin'ny fifandraisana ara-pihetseham-po eo amin'ny reniny sy ny zanany koa.
Ny krizy amin'ny 5 taona amin'ny ankizy - toro-hevitra amin'ny psikology
Pasipaoro ho an'ny zaza vao teraka
Engry Berdz avy amin'ny plasticine
Rimina zaza rima
Ny zanakavavin'i Kurt Cobain
Inona no tokony hanolorana ireo mpampianatra amin'ny balala?
Pilea - fikarakarana tokantrano
Modely ho an'ny trano fandraisam-bahiny
Ny vadiny taloha Janet Jackson dia naneho hevitra voalohany momba ny fisarahana amin'ny mpihira
Syrup Sinekod - ireo karazana fampiharana ho an'ny zazakely
Homamiadana amin'ny menopause - fanafody
Ny atody mitahiry
Fomba fitsaboana basilika
Fampivelarana latabatra ho an'ny ankizy
Tom Hanks dia nanao selfie tamin'ny sarin'ny mpankafy azy
Glandache amin'ny vehivavy bevohoka - antony
Beyonce sy Jay Zi - ireo mpivarotra mpivarotra be mpividy indrindra
Rahalahy Céline Dion